Iinyani zaseMelika zeBulldog kunye neefoto - Inja Izilwanyana
Iinyani zaseMelika zeBulldog kunye neefoto
I-American Bulldog yiyo Olunye uhlobo olukhula ngokukhawuleza eUnited States, nangona ingaziwa ngabantu abaninziiirejista zenzala. Inja enamandla, ekrelekrele nethembekileyo inokwenza iqabane elifanelekileyo kumnini wenja olungileyo.
Imvelaphi yaseMelika yeBulldog
I-American Bulldog's yookhokho ibuyela emva kwi-1121 BC kwaye ibikho e-United States ukusukela nge-17thkwinkulungwane . Ikwabizwa ngokuba sisiNgesi esimhlophe, isiNgesi esimhlophe, Alabama Bulldog, Southern Bulldog, Old Southern White, American Pit Bulldog, kunye neBulldog. Igama langoku lavela kwiminyaka yoo-1980. Inja yayifuyiselwe inkunzi yenkomo, ibhere, kunye neenyathi kwaye 'njengezinja zokubamba' eMazantsi mpuma. Amafama azisebenzisela ukukhusela ngokubanzi nokubambisa izilwanyana ezinkulu.
I-Dogo Argentino Inzalo yeNzala, ubushushu, kunye noKhathalelo
Inqaku leNja yeBhokisi enomdla
Incinci yesiNgesi Bulldogs
Ubhaliso kunye neentlobo
Yaziwa yi Umbutho waseMelika oxhaphaza abantu eKennel , I-American Bulldog ineentlobo ezimbini eziphambili: UScott noJohnson , ebizwa ngamagama abafuyi abazenzileyo. Uhlobo ngalunye lunezalo iimpawu ezahlukileyo :
Iindidi zikaJohnson zihlala zikhulu kwaye zinamasheya ngemihlathi engaphantsi njenge-Bulldog yesiNgesi. Ininzi imhlophe, ijongeka njengeeBull Mastiffs okanye iiNgesi zeBulldogs.
Iindidi zeScott zinendawo yokuluma ngakumbi kwaye zincinci. Bajonge ngakumbi njenge-American Pit Bull Terrier, enkulu nje kwaye inamanqina amade, emidlalo yeembaleki. Zihlala zimhlophe ngombala omdaka, omnyama okanye obomvu, nangona ezinye zimhlophe.
Uhlobo lwesithathu, iHybrid, ludibanisa iScott noJohnson. Ezinye iintlobo ezimbalwa ezikumazantsi mpuma zincinci zohlobo.
IiBulldogs zaseMelika xa kuthelekiswa nesiNgesi kunye nesiFrentshi iBulldogs
Ii-Bulldogs zaseMelika azifani nesiNgesi okanye isiFrentshi iBulldogs. Ngelixa zonke ii-bulldogs zinemvelaphi efanayo, zineempawu ezahlukeneyo.
I-American Bulldog yiyo inkulu kakhulu , inobunzima obufikelela kwi-120 yeepawundi, kwaye yayiyinja esebenzayo kunye nenokhuseleko.
IsiNgesi Bulldogs, ekwabizwa ngokuba yiBritish Bulldogs, inobunzima obufikelela kwi-55 yeepawundi. Namhlanje, bazalwa njengezinja ezingamaqabane. Banemizimba emininzi kwaye ubuso be-brachycephalic .
Bulldogs zaseFrancebunzima ukuya kuthi ga kwiipawundi ezingama-30 kwaye zaqala ukudalwa njenge-Bulldogs ezincinci zesiNgesi. Zineendlebe ze-perky kunye neempawu zobuso ezingaphantsi.
Ngaba i-American Bulldog yi-Pit Bull?
Inkunzi yenkomo ayiyiyo inja emsulwa, kodwa injalo wabelane ngookhokho abafanayo kunye neAmerican Pit Bull Terrier, iAmerican Staffordshire Terrier, kunye neStaffordshire Bull Terrier. Nokuba bajongeka ngokufana, iAmerican Bulldog ithathwa njenge inja esebenzayo ngaphakathiiqela le-mastiffNgelixa ii-pit bull zikwiqela eliqhekezayo. Inkqubo ye- Umxhaphazi waseMelika ikwahlala ididekile ne-American Bulldog.
Icala ecaleni lokuthelekisa
Ngelixa i-American Pit Bull Terriers kunye ne-American Bulldogs ijongeka ngokufanayo kwaye yabelana ngeempawu ezininzi, ziyizinja ezahlukileyo ngokucacileyo xa zijongwa ecaleni komnye nomnye. Kumfanekiso ongentla, inja emhlophe ngasekunene yi-American Bulldog enobungqongqo obucacileyo, obunzima, umzimba omkhulu kunye nobuso obugcweleyo. I-American Pit Bull Terrier ekunene ikwayinja yemisipha, kodwa incinci ngokwakha ngakumbi kwaye nobuso obuncinci.
I-American Pit Bull Terrier, ekhohlo kunye ne-American Bulldog, kunene
I-American Bulldog yinja enamandla ene ujongo olwahlukileyo . Amadoda ama-American Bulldogs anokuba nobunzima ukusuka kuma-66 ukuya kuma-130 eepawundi kwaye abantu basetyhini banokulinganisa phakathi kwama-60 nama-90 eepawundi. Amadoda naphina ukusuka kwii-intshi ezingama-20 ukuya kwezingama-28 ukuphakama ngelixa abantu basetyhini bekwi-intshi ezingama-20 ukuya kuma-24. Ubomi obulindelweyo yiminyaka eli-10 ukuya kweli-16. Zivamise ukuba zizinja ezinezihlunu ezisukela kwistoya ukuya kwezemidlalo. Idyasi emfutshane kufuna ukulungiswa okuncinci Ngaphandle kokuxubha rhoqo kunye neebhafu ezimbalwa apha enyakeni. Bayaphalaza kancinci nangona baneenwele ezimfutshane. Umbala waseMelika weBulldog konke kungamhlophe okanye kuxutywe okumhlophe ne-brindle, fawn, ebomvu okanye iiteki. Uninzi, nangona ingenguye wonke, I-American Bulldogs iya kuhla, ngoko ke zilungele ukujongana nesobber.
Ubuntu kunye nobushushu
I-American Bulldog yinja enamandla efuna uqeqesho. Ukuhlalisana kwasekuqaleni kunyanzelekile.
Bathanda ukuba njalo bathandana nabantu babo kwaye banokwenza izinja zosapho ezilungileyo kunye nabantwana abadala.
Banokuba njalo ukukhusela abantu ongabaziyo kwaye iya kukhonkotha ukulumkisa izoyikiso kodwa iyonke ayizizo izikhonkwane zinzima.
Bazalelwa ekubeni zizinja ezisebenzayo kwaye kufuneka babenovuselelo olwaneleyo lwengqondo kunye nokusebenza komzimba ukuze bonwabe.
Banokwenza kakuhle ngeekati kunye nezinye izinja kodwa bayaziwa ngokuba ndlongondlongo kunye nezinye izilwanyana ezingaqhelekanga okanye izinja zesini esifanayo emakhayeni abo.
Iimeko eziphakathi kobundlongondlongo zinokuvela ekhayeni phakathi kwe-American Bulldogs kunye nezinye izilwanyana zasekhaya, nkqu nezo bakhuliswe nazo, kwaye ngelixa uninzi lwe-American Bulldogs zingazibonakalisi ezi ndlela zokuziphatha ezinokubakho kufuneka zibenako ukubanakho.
Bakrelekrele kakhulu kwaye bayonwabeleuqeqesho oluqinisekileyo lokuqinisa. Ziyasebenza kwezemidlalo ezifana uqeqesho lobuchule kwaye ukutsala ubunzima kwaye abanye bayakonwabela ukudlala nokudada emanzini.
Ii-Bulldogs zaseMelika zithambekele kwinani elinokwenzeka izifo kunye neengxaki zempilo .
I-Hip kunye nengqiniba yedysplasiakunokukhokelela ekulahlekelweni ngokupheleleyo kokuhamba kwiimeko eziphambili.
Ukwalana komzimbaIngabonakala njengengubo eyomileyo okanye enamafutha, ngamanye amaxesha eneflakes ebonakalayo yesikhumba.
Iidemokhrasi ezininziyenza ukuba inja izive irhawuzelela ngokungaphaya ngalo lonke ixesha.
Izithulu unokuba lilifa kwaye ungaqala kwisithuba seeveki emva kokuzalwa ukuba akukabikho ekuzalweni.
Ukungena kuxa ijwabu leso 'liqengqeleka' ngaphakathi kunye neenwele zikhuhla zijongise kwi-cornea.
Imiba ye-thyroidkunokukhokelela kukudinwa, ukuba buthuntu kunye nokuzuza ubunzima.
Isifo seBrachycephalic ichaphazela iintlobo ezinobuso obuncinci.
Uyifumana njani Injana yaseMelika yeBulldog
Ukuba ufuna ukufumana intshontsho lenzala yaseMelika iBulldog, unokufumana umfuyi nge Umbutho waseMelika weBulldog kwaye i Iqela elidibeneyo leKennel . Lindela ukuhlawula malunga ne-775 ukuya kwi-800 yeedola kwi-American Bulldog puppy, nangona izinja ezenziwe ngephepha ezinezihloko zingabaleka ziye kuthi ga kwi-1,600 ukuya kwi-8,000 yeedola. Ukuba ukhetha ukuhlangula, zama ukunxibelelana Uhlangulo lwaseMelika Bulldog okanye Uhlangulo eMaryland American Bulldog . Esinye isixhobo esikhulu ngu Petfinder . Yandisa uphendlo lwakho ukuba lubandakanye i-pit bull, Uhlobo lokuxhaphaza , kwaye inja enkulu ihlangula, kwaye ke, jonga nge indawo yakho yokuhlala naye!
Iinkcukacha ezimnandi malunga ne-American Bulldogs
I-American Bulldogs inokufumaneka kwimithombo yeendaba ethandwayo. Ithuba lenja kwifilimu yosapho oyithandayo Ukubuyela ekhaya: Uhambo oluMangalisayo wayeyiBulldog yaseMelika. Ezinye iifilimu ezinama-American Bulldogs zezi UJoe , Ixabiso elincinci ngamashumi amabini kunye noPetey ekubuyiseni kwe IiRascals ezincinci .
Ilogo yenkampani yomdlalo iZynga Inc. ilogo yomfanekiso womniniyo I-American Bulldog Zinga.
IiBulldogs zaseMelika zaziwa ngokuba nazo Inkunkuma enkulu ngokungaqhelekanga izinja ezinobungakanani bazo. Umfazi okhulelweyo unokuba namantshontsho alishumi elinanye!
Njengoninzi lwezinye iintlobo ze-bulldog, ii-American Bulldogs zinokuba 'ziyathetha' kwaye zithethe nabanini bazo ngeendlela ezahlukeneyo zokubamba, ukukhalaza kunye nezinye iingxolo ezihlekisayo.
Ngaba Olu luhlobo lwakho?
I-American Bulldog isebenza kakuhle nomnini onokuthi ahlangabezane neemfuno zabo ngokufanelekileyo. Oku kubandakanya ukubonelela ngemisebenzi esebenzayo kunye neyomzimba rhoqo, ukuqinisekisa ulwalamano kwangethuba nangokuqhubekayo kubo bonke ubomi babo, kunye nokujongana nobundlongondlongo obunokubakho. Yazi ukuba abanye abantu kunye namashishini orhulumente angayibona inja yakho njenge-pit bull kwaye ayithobele Ukuzalelwa koMthetho ocacileyo njengo ubunzima bokufumana i-inshurensi yasekhaya . Imithetho ye-BSL iyahluka kakhulu ke kufanelekile jonga indawo okuyo ukubona ukuba ngaba kukho ukuvalwa kohlobo kwaye ukuba ii-American Bulldogs zibandakanyiwe.
Ukukhula Inja Ingcali Udliwanondlebe Enkulu Nayo Indoda Mnyama Impahla Iibhalbhu Malunga Cars
ingakanani i-jeep wrangler inobunzima
indlela yokuxabana nosapho
imidlalo yamakhadi okuqhekeka yabadlali ababini